Cristiano Ronaldo oo Xalay Jabiyay Rikoodhka gool dhalinta ee Macalinkiisa Ole Gunnar Solskjaer | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Cristiano Ronaldo oo Xalay Jabiyay Rikoodhka gool dhalinta ee Macalinkiisa Ole Gunnar...
Cristiano Ronaldo oo Xalay Jabiyay Rikoodhka gool dhalinta ee Macalinkiisa Ole Gunnar Solskjaer
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa goolkii uu xalay ku badbaadiyey Manchester United waxa uu ku jabiyey rikoodh dhinaca gool-dhalinta ah oo uu haystay tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Red Devils ayaa xalay barbarro 2-2 ah la gashay Atalanta iyadoo waqtigii dheeraadka ahaa uu Cristiano Ronaldo goolka labaad u dhaliyey Manchester United oo laba jeer lagala hormaray goolasha.
36 jirkan ayaa ciyaarta kaddib waxa uu qirtay inuu nasiibku siiyey goolka uu xilliga dambe dhaliyey, sababtoo ah waxay ahayd waqti ay kooxdiisu u muuqanaysay in ay niyaddooda gashay in laga adkaaday.
Cristiano Ronaldo ayaa 303 ciyaarood oo uu u saftay Manchester United, waxa uu u dhaliyey 127 gool, waana marka la isku daro labada xilli ee sannadaha badan u dhexeeyaan ee uu u ciyaaray Red Devils.
127-ka gool ee uu dhaliyey, waxa uu hadda hal gool kaga sare maray tababaraha hadda ee Ole Gunnar Solskjaer oo 366 ciyaarood oo uu u saftay Manchester United u dhaliyey 126 gool, kuwaas oo uu ku jiro goolkii taariikhiga ahaa ee finalkii Champions League ee 1999kii.
Ronaldo iyo Solskjaer ayaa u wada ciyaaray Manchester United muddadii u dhaxaysay 2003 illaa 2007 ka hor intii aanu Solskjaer ka fadhiisanin ciyaaraha.
Cristiano Ronaldo ayaa noqday badbaadiyaha Manchester United ee xilli ciyaareedkan. Kulankii Villarreal ayuu goolka guusha dhaliyey ilbidhiqsiyadii ugu dambaysay, ciyaartii xigtay ee Atalanta ee Old Trafford na sidaas oo kale ayuu sameeyey, halka uu xalayna laba gool saxeexay, laakiin midka dambe ee barbarraha keenay uu aha adhamaadkii.
Si kastaba, Ronaldo ayaa Manchester United u ciyaaray 11 kulan oo dhamaan tartamada ah, waxaana uu dhaliyey sagaal gool oo ay afar ka mid ahi yihiin tartanka Champions League.
Previous articleSababta loo haysto kursiga Mahdi Guuleed iyo xukunka laga filayo guddiga xalinta
Next articleGalmudug oo war kasoo saartay ciidamada isku urursaday Bohol
Ac Milan oo Gurigeeda lagu Xasuuqay, Roma oo guul gaartay, PSG oo Hogaanka sii dheereesatay, Kulamada Laga Ciyaaray Horyaalada Caalamka
Chelsea 1-1 Manchester United: Blues iyo Red Devils oo ku Heshiiyay Bar-baro, Kulan Hal dhinac ahaa
Manchester City 2-1 West Ham United: City oo Guul ka gaartay Kooxda West Ham United
Shaxda Rasmiga: Chelsea Vs Manchester United Kulanka Derbiga ee Horyaalka Premier League-ga, Liiska Xidigaha lagu soo bilaabay Ciyaarta
Turkey oo masaafurineysa 7 qof oo Syrian ah oo ujeedo yaab...
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Ankara (Caasimada Online) – Turkey ayaa Khamiistii ku dhowaaqday inay xirtay oo ay qorsheyneyso inay dalkeeda ka ceyriso toddoba qof oo muhaajiriin Suuriyaan ah,...
Manchester United oo dooneysa in mustaqbalka Paul Pogba la xaliyo ka...
Mustafe Cagjar oo dib loogu doortay dowlad deegaanka Soomaalida
Madaxweyne QOOR QOOR oo hal arrin ka ballan-qaaday xubnaha Beesha Caalamka
Steve McManaman oo ku booriyay Real Madrid inay lasoo saxiixato xiddiga...